Kormeerka degmooyinka Bari, Guardafu, Sanaag, Haylan iyo Karkaar ee Kooxda Kormeerka Wadajirka – Sawirro – Ophrd
Garowe – Kooxda kormeerka wadajirka ah oo koobnaa xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha, xubno ka tirsan Baarlamanka Puntland, Xafiiska Xeer-ilaalinta iyo Gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa kormeer iyo dabagal ku sameeyay hawlaha saldhigyada booliska, xabsiyada, rugaha caafimaadka iyo xaruumaha maamulka ee Boosaso, Baargaal, Gumbax, Carmo, Qardho, Dhahar iyo Badhan.
Kormeerka oo dhacay laba xili oo kala duwan bilihii Janaayo iyo Febraayo ee sannadkan ayaa kooxdu ugu kuur-gelaysay xaaladda xuquuqda Aadanaha ee maxaabiista iyo tan goobaha dadka lagu xiro ee degmooyinkaas.
Docda kale, waxay kooxda kormeerku door muhiim ah ka ciyaarayeen in ay si dhow u wada shaqeeyaan hay’adaha sharci fulinta, Garsoorka iyo xafiiska Difaacaha ee degmooyinka la booqday, si loo sugo nidaamka wanaagsan ee caddaaladda iyo kor u qaadista xaaladda xuquuqda Aadanaha.
Kooxda Kormeerka ayaa warbixin ka soo saaray waxyaabihii ay soo arkeen, taas oo ay u gudbiyeen hay’adaha fulinta ee ay sida tooska ah u khuseeyo iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni si loo hagaajiyo dhismaha maxkamadaha, saldhigyada Booliska iyo adeegyada dadweynaha ee goobaha ay kooxdu tageen.
Warbixinta oo dheerayd waxaa qayb ka ahaa talo-soo jeedinnada hoose;
Hay’adaha dawladda inay gaaraan deegaanada fog fog, si ay u soo dhegaystaan waxna uga qabtaan tabashooyinka shacabka goobahaas ku nool.
In dib u habbayn buuxda lagu sameeyo ciidanka booliska, gaar ahaan hoggaanada lana soo kordhiyo hogaanka isla xisaabtanka.
In xarumo loo dhiso maxkamadaha degmooyinka Baargaal, Gumbax iyo Dhahar isla markaasna dayactir lagu sameeyo maxkamadaha degmooyinka Badhan iyo Carmo.
In dayactir lagu sameeyo saldhigyada magaalooyinka aan booqanay, gaar ahaan saldhigyada Baargaal, Gumbax, Carmo, Dhahar iyo Badhan.
In dawladdu wax ka qabato maraakiibta iyo doonyaha jiriifka ku haya xuduud badeedkeenna, kuwaas oo dhibaato weyn u geystay xoogsatadii badda iyo qoysaskooda.
In dad aqoon, xirfad iyo hufnaan leh loo magacaabo maxkamadaha ciidanka si caddaalad u helaan dadka gar-sugayaasha muda dhaafka ah ee xabsiyada ku jira.
In qiimaha garaamka maxaabiista loo kordhiyo, adeegyada caafimaadka iyo fayadhowrkana si joogta ah loo gaarsiiyo, gaar ahaan dawladaha hoose si joogta ah uga shaqeeyaan fayadhowrka.
Dawladda inay iska xilsaarto sidii gaadiid loogu heli lahaa maxkamadaha iyo saldhigyada booliska si ay shaqadooda ugu gutaan si habsami leh.
Guddiga Kormeerka Wadajirka ah
Guddoomiye, Nuur Ciise Maxamed
Xeer-ilaaliye Guud Maxamuud Xasan Aw Cismaan
Xildhibaan Maxamed Axmed Cabdi Xaraf
Difaace Maxamed Yuusuf Cali
← Hay’adaha Sharci fulinta Puntland oo ka wada-hadlay caddaalad u helidda tacadiyada ku dhaca haweenka	Xafiiska Difaacaha iyo Bulshada Rayidka ah oo wadajir ugu qareemay maxaabiista qaanta u xiran – Sawirro →